Summer - isikhathi esiphelele ngamaholide kanye nohambo. Futhi eminyakeni yamuva, izivakashi Russian ngokuya uthanda ukuhlala ekhaya. Kulesi sihloko sizoxoxa ngendlela engavamile futhi ezithakazelisayo ukuchitha isikhathi - cruise emkhunjini "Dmitriy Furmanov".
Izivakashi umkhumbi waqala impilo emuva ngo-1991. Kodwa ngesikhathi umkhumbi "Dmitriy Furmanov" bakhonza kuphela angaphandle izivakashi fun uhambe emzileni eMoscow - Petersburg.
Ngo-1995 umkhumbi zalungiswa. Made esikhundleni ifenisha kanye mata, futhi zonke izikebhe anemisila zonke Izinsiza ezidingekayo (air conditioning, eshaweni, yokugeza kanye yangasese).
Ngo-2012, umkhumbi waba izivakashi iyatholakala futhi Russian. Ngo-2016 umkhumbi wadluliswa phakathi kwelifa loonyana inkampani lokuthumela "Infoflot".
Umkhumbi "Dmitriy Furmanov" lakhiwa e shipyards German ngo-1983. Amatilosi zabantu 98, futhi apholile lingahlala abantu 332.
Lo mkhumbi motor uyisitsha aphakeme. gumbi ngamunye ifakwe esiqandisini, air conditioning, i-TV, umsakazo kanye hairdryer. Isigaba Suite kuhlanganisa iqoqo Cutlery kanye izitsha, amanzi okuphuza, bathrobes futhi Slippers. Emkhunjini iziteshi eziningana emaphakathi etholakalayo ukuthi yamukelwa ngokusebenzisa satellite, futhi isakaze interrnal: ukuphepha isiteshi, amakhathuni kanye amabhayisikobho, ibalazwe GPS, indawo canal umbono esuka egumbini sise Iminsalo umkhumbi.
Izivakashi zinikezwa mahhala:
IBhodi umdlalo chess, Checkers, Backgammon et al.
Volleyball kanye lezinyawo amabhola, ibhola likanobhutshuzwayo isethi, sidlala amakhadi, lolwandle amacansi kanye nezingubo zokulala ezifudumele.
Ingabe imibhede zezingane atholakalayo ngesicelo ingafakwa ku gumbi. Le restaurant has izihlalo yezingane ekhethekile sika.
Futhi esikebheni kuba umtapo ezinkulu.
Ekhokhwayo ungakwazi ukuqasha omabonakude kanye amathawula, incwadi kanye isiqophi izithombe, Ilondolo kanye nezakhiwo zamahhovisi itekisi. Futhi ebhodini kukhona zokudlela ezimbili, Amabha amathathu, sauna, ikamelo lengqungquthela, isikhumbuzo esitolo, solarium, inkonzo yezokwelapha futhi igumbi ayina.
On the umkhumbi "Dmitriy Furmanov" Njengoba ingxenye enkulu yomsebenzi kumakhabheni (ngaphandle Suites futhi samakamelo amancane) ephawulwe A. isici wash elisemcengezini, yangasese kanye eshaweni. Digital, okuyinto kulotshwe emva izinhlamvu ezingu-A, lisho izindawo inombolo. Okunye izinhlamvu zibonisa lapho itholakala endlwaneni eyakhiwe.
Manje ake sibheke ezinye onezitezi kumakhabheni kukhona isigaba esithile:
Isikebhe. Nazi Suites double futhi samakamelo amancane, kanye gumbi ekilasini A1 kanye A2.
emphemeni Isilinganiso has A2 Igumbi class kuphela. Sibutsetelo ezinye zazo evala isicupho, ezifuywa eseduze. Futhi kufanele inake lapho ukhetha izindawo.
Ikhaya. Kukhona futhi kuphela A2 ekilasini gumbi.
Lower. Kuphela kule emphemeni has a kumakhabheni kathathu futhi quadruple.
Umkhumbi "Dmitriy Furmanov" likhulu kakhulu, ngakho-ke ngokuvamile izinkinga Ukukhetha izindawo nezikhali asivelanga. umgibeli ngamunye bangakhetha ukuthi yini esifanele, yena nomkhaya wakhe.
Ingabe ukuhamba ngesikebhe ukubhaliswa kanye kokwehla, eyabe isifika amahora amabili ngaphambi Dispatch indiza. Isikhathi sokuhamba ingatholakala travel amaphakheji.
Ukubhalisa ngokwayo senzeka ngokushesha futhi ngaphandle tape obomvu. Emnyango ngeke nje kudingeka sibonise passport yakho futhi ithikithi, izivakashi ke uzonikezwa okhiye apholile, okungase matasa ngokushesha. Kamuva bazoyithola zokugibela, okhombisa inani iqembu lezihambeli indawo kanye yokudlela amatafula. Futhi, abagibeli ungacela okhiye esengeziwe kumakhabheni yabo.
Uma zezihambeli ziyafika ngaphambili emfuleni esiteshini, zingagoduka izinto zabo igcinwe endaweni cruise ukuphathwa, kodwa kuphela uma umkhumbi isezingeni ebhentshini elingaphansi. Nokho, ukuze sibe ebhodini phambi Akunakwenzeka ukuthi la mavesi kubhaliswe.
Ukudla kwasekuseni, kwasemini kanye dinner, abagibeli can kwelinye zokudlela ezimbili ngaphandle komkhumbi. Ngesikhathi esifanayo kudlule phezu kwasekuseni "lezitsha", futhi omunye izitsha ambalwa ungakhetha ukudla kwasemini kanye dinner ahlinzekwa kwimenyu. Abagibeli uphiwa izifundo main, amasobho, amasaladi kanye nama-dessert. Kusukela iziphuzo kwasekuseni, ungakhetha ayo, ubisi, itiye, ikhofi, champagne; ngokudla kwasemini - ikhofi, ijusi kanye itiye; eyodla - itiye izinhlobo zophuzo oludakayo. Izingane ezingaphansi kweminyaka emihlanu ubudala abakwaziyo ukuhamba mahhala, kukhona imenyu enezingane ezinezidingo ezikhethekile sika.
On the isikebhe futhi Amabha amathathu umsebenzi ezithanda amakhasimende okunezinhlobonhlobo elikhulu iziphuzo ezidakayo nezinto zokuhlanza ezithambile, kanye nama-dessert. Kuze 00,30 futhi lapha ungathola izitsha hot. Kungenzeka futhi ukuba ukubhuka gumbi iyiphi ibha umkhiqizo. Emini ukungcebeleka izindawo ubhiya umkhumbi ukusabalala, iziphuzo ezibandayo futhi Ungadla.
Cruise emkhunjini "Dmitriy Furmanov" kusho izitobhi eziningana nge hambo. Zonke abagibeli zihlukaniswe amaqembu, ungasebenzisa lokho okushiwo umuntu ohumushela lesiNgisi uma kudingeka.
Imizila engaphezu Cruises kweshumi. Ziyahlukahluka kuye ngezindlela eziningi. Endaweni yokuqala ngenani lezinsuku - isikhathi ojikelezayo angase kusukela ezinsukwini 3 kuya ku-15. Futhi ngokuvumelana semizi wavakashela. Lo mkhumbi motor kungaba embobeni eyodwa, ezifana Tver nanhlanu. Into kuphela ukuthi uhlala njalo - cruise uDavide uqala futhi aphethe ethekwini eMoscow.
Sibala edolobheni, okungase kufakwe ukuvakasha: Uglich, Tver, Myshkin, Kostroma, Yaroslavl, benzisa, Kizhi, Gorica, Mandrogi, Petersburg, Valaam Island, Sortavala, Svirstroy, Cherepovets, Vytegra, Petrozavodsk nabanye.
Izindleko kanye nesimiso
Izikhangibavakashi Luhlelo Four-umkhumbi ukuze waziwe ngqo phambi ithikithi ukuthenga, njengoba ishintsha njalo.
Njengoba for izindleko, inani kuzoncika umzila, isikhathi travel futhi gumbi ekilasini. Ngokwesilinganiso, intengo kungaba isukela ruble umuntu ngamunye 12,000 ukuze 75,000.
Futhi unomphela uhlelo izaphulelo. Ezinganeni kufika eminyakeni engu-14 ihlinzeka 15% isaphulelo, futhi abagibeli ngaphansi kweminyaka engu-5 ukuhamba mahhala. Futhi ku sentengo bangalindela Izinsuku zokuzalwa, impesheni kanye labo sengisilethe emashalofini eliphezulu apholile amakilasi A3 futhi A4. Amaqembu zezivakashi futhi uthole izaphulelo kusukela 7 kuya ku-13% kuye ngenani lezihambi.
Kusolwa ukuthi kungenzeka cruise ecebeni isitolimende. Imali sokuqala% 40 kuphela.
Umkhumbi "Dmitriy Furmanov": Izibuyekezo
Manje ake sixoxe onjani umbono eshiywa yizivakashi ukuhamba ngomkhumbi. Zisuka nje ukuthi libuyekeza ka cruise kokushiya okuhle nokubi kakhulu.
Okokuqala, ake sixoxe kochwepheshe. Okokuqala nje langa ukubukwa futhi ukubona indawo izinkambo. Futhi qaphela ngezilokotho izisebenzi, ukudla okuhle, amanani ezifanele in imigoqo kanye nezinye iziphuzo utshwala. Plumbing in the gumbi isebenza kahle. Inani elikhulu ukuzijabulisa ebhodini, musa uthole nesithukuthezi ngisho ikhasimende olindele kunazo. abasebenzi friendly, ukhwaliti enhle futhi yokuhlanza ngesikhathi esifanele amakamelo.
Nokho, uhambo ngesikebhe ngeke ukujabulisa bonke abantu. Abanye abagibeli bathole amaphutha alandelayo. Apholile ifenisha kuyinto imibhede ubudala futhi ayibanzi. Awukwazi ukudla noma kuphi ngaphandle zokudlela ngesikhathi ukudla kwasekuseni, kwasemini noma dinner. Abanye abantu baye baphawula isimo sengqondo sabantu sokunganaki namatilosi omkhumbi.
Umkhumbi "Ivan Kulibin": ngezibuyekezo nezithombe zezivakashi
The best tour operator e Sri Lanka
I Cruises ethandwa kakhulu iVolga e Volgograd
Inkampani yokudlela lokuqala
Udweba kanjani orange: izigaba, ipensela
Primus fix: lapho inkulumo ethi "belungisa primus" futhi lisho ukuthini?
Varus unyawo ezinganeni nakubantu abadala: ukuxilongwa kanye nokwelashwa
TSikloferon (amaphilisi): yokusetshenziswa
Ama-ATV amathayi aphansi okucindezelayo: isithombe
Njengoba prigotovit isibindi ikhekhe: ezinye izinhlobo zokupheka
I-Aquarium fish parrots